PhenteSi Park any Phuket ~ Journey-Assist - Mahaliana ao Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » FantaSea Park
Phuket FantaSea Park, Phuket
Famaritana ny Fantasy Sea Park ao Phuket. Vidin-javatra.
Fantasy Park amin'ny sari-tany. Ahoana no hahatongavana any.
Sary sy horonan-tsary an'ny Fantasy Park
Hevitra momba ny Fantasy Park (valin'ny Google)
Ny famandrihana Fantasy Sea Park (Tripadvisor.ru)
Ny velaran'ny velarantany dia 57 ha, ary mizara ho ampahany 3. Ny voalohany amin'ireo zona ireo dia ny toerana hanaovana fampisehoana marevaka mandritra ny antsasaky ny ora, hetsika an-tsehatra ho an'ny ankizy sy amin'ny lehibe, fety ary fampisehoana an-tsary. Ao amin'ny faritra faha-2 dia misy ny trano fisakafoanana Golden Kinnari, ary ny faritra faha-3 no antsoina hoe. "Lapan'ny elefanta."
Amin'ny ankapobeny, Phuket Fenteci dia mitovitovy amin'ny Disneyland, fa amin'ny tsirony Thai, satria samy manana ny kolontsainan'ny firenena tany Thailand tany am-boalohany ny zava-drehetra.
Amin'izao fotoana izao, ny fampisehoana FantaSea (Fantasy) any Phuket dia iray amin'ireo seho folo malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao!
5) PHUKET FANTASEA / Fantasy (Phuket, Thailand)
Makà sary ary alaivo ny fampisehoana Fantasy dia voarara!
Famindrana (lalana mankany amin'ny zaridainam-panjakana na aiza na aiza any Phuket ary miverina) - 300 baht.
Ny tapakila dia azo vidina ao amin'ny zaridainan'ny tenany ary eo am-barotra amidy amin'ny fitsangantsanganana isan-karazany, izay ao Phuket isaky ny dingana. 🙂
Tranonkala ofisialy http://www.phuket-fantasea.com
Phuket FantaSea Park, (Phuket FantaSea) amin'ny sarintany
Park Phuket FantaSea, (Phuket FantaSea). Sary sy horonan-tsary
Famerenan'ny Phuket Fan Park ao amin'ny Phuket (famerenana Google)
Famerenam-bolan'ny Phuket Fan Park (Tripadvisor.com)
Mampisehoa nofinofy .. Tena mila mitsidika anao. Tsy ambany raha mampiseho ny fampisehoana fahafito amin'ny Ramid.